Adda Walabummaa Demokratawa Oromiya (AWDO) Front for Independent Democratic Oromia (FIDO) – Welcome to bilisummaa
Adda Walabummaa Demokratawa Oromiya (AWDO) Front for Independent Democratic Oromia (FIDO)
bilisummaa May 15, 2016	Leave a comment
Guyyaa: Caamsa 15, 2016
Irraa: Adda Walabummaa Demokratawa Oromiya (AWDO) Front for Independent Democratic Oromia (FIDO)
Gara: Ummata Oromiya, Miseensota fii Deeggartoota FIDO
FIDOn seenaa qabsoo bilisummaa Oromiyaatiif isa angafa. Haa tahuu malee, eega bu’ureeysaa fii soorisi isaa Jaarraa Abbaa­Gadaa du’aan addunyaa tanarraa dabran booda, akka barametti dirree qabsoo irratti fuldureen mul’atuun hin turre.
Wayta amma jirru kana keeysatti, mootummaan saba­bicuu Tigreetiin hoogganamtu milkii ummanni keenya qabsoo baroota dheeraa, kan wareegama heddu fixeen argate harkaa hinxilifuu qofatti osoo hin oolin ummata Oromoo lafarraa duguuguuf imaama baafatte hujiirra oolchaati jirti. Ummanni keenyaas, dargaggoota isaan hoogganamee falmaa jiruu­jireenyaa godhaa jira. Keeysaahuu, qabsoon barattoonni keenya, “lafti lafee tooti,” jechuun ji’oota jahan dabran gochaa jiran nama abdachiisa. Diinni hundeen roora’ee Oromiyaa guutuu irratti duula labsuu mudatee jira. Qasoon haqaa humnaan iddoo itti jilbiifte seenaa keeysa waan hin jirreef, hammamuu turu, boodeetti moohannaan teenyaa akka taatu shakkiin hin jirtu.
Tana hubatuudhaan, hoogganoonni fii misoonni gameeyyiin FIDO calleeysa lakkifnee ummata keenyaaf dirmachuu murteeysine. FIDOn dur daran jaarmaya isaa qindeeysee faaga qabsoo irratti deebi’ee, ummata Oromoo dandamachiisuuf waadaa haarayoomsa.
Ummata Oromoof: ilmaan keenya kanneen diinaan qalamaa jiruuf gadoodaa fii iyyannaa keeysan dhageenye; isinirraa dhibaawuu keenyaaf dursinee dhiifama guddaa isin gaafanna. Amma ammo, dirmachuuf qophee tahuu keenya asumaanuu ibsinna.
Jaarmayoota qabsoo bilisummaaf: dhiheenya kana jaarmayoonni qaama Adda Bilisumma Oromo turan walitti deebi’anii, tokkumaan qabsoo gochuuf yaalii eegalame, galma akka gahu hawwuudhaa fii gammachuu nutti dhagahame dursinee ibsina. Ummanni keenyaa fii qabsoon
bilisumma Oromiyaa tana caalaa nurraa barbaadu; kanneen hafanillee dabalatee, tokkummaa hujii hatattamaan nurraa eegatu; milkoominaas abdiin eegganna.
Akka FIDO tti fedhiin teenya, ummanni Oromoo, human galii isaatiin gahu horatuufiis tahee hegeree Oromiyaatiif, tokkummaa hunda Oromoo if keeysaati ammate irraa gurmaawuu barbaachisa jenneeti amanna. Dhaabolee siyaasaa, jarmaya ummata (hawaasaa fii amantiilee, ogeeyyi, daldalaa fii wkf) fii namoota matayyaa dabalatee , taligaa walo qabaatee sirna democracy kan gadaa Oromo irraa maddeen yoo jaarame filanna.
Ummanni Oromo, Oromiya walaba/bilisoomte irratti abbaa tahuu feda. Tanaratti tokkummaa qabaatuu isaa hujiin mirkaneeyseeti jira. Jaarmayooni bilisummaa Oromo maqaa dhawatan yaada kanarratti walii­galtee qaban jennee ammanna. Milkii hamma­ammaatti qabsoon gonfate iggitii itti gochuu fiis tahee, dambooba bilisummaaf ummanni keenya qabu kana galiin gayuuf tokkummaa hujiiti nurraa barbaada.
Wanni dagatamuu hin qabne, dhaabbileen kanneen marti ABO keeysaa burqan. Hoogganoonni isaanii bu’aa bahii qabsoo Oromoo tan barreen afurtam caalaa lakkaawwatte kana keeysa
waliin as gahan. Tolchaniiti wal beeku jechuudha. Walitti baqanii tokkummaan ummata keenya hoogganuufiis tahee qabsicha dhaloota haarayaaf dabarsuuf, akkuma ummanni keenya aarsaa qaqqaalii baasee haqa isaa murteefatuuf gochaa jirutti, dhugaa fii murannoon walittti dubbatuudha feesisa. Ammaan tana ummanni keenya, xiqqaa­guddaan, iddoo maraa, sagalee takkaan, harka duwwaa, diina lola malee tola hin beeyne, kan ilmaan isaa ibidda rasaasaatiin waadaa jiruun harkaa walqaba. Wayta tanatti daaddee walgoodhuu fii ummata keenyallee kolooloolesuun waan eeggamaatii miti; tokkummaan humnooynee wareegama ummata keenya gatii itti gochuudha barbaachisa.
Guyyaa hamtuun namatti galte firaa fii diina adda baru ja’a Oromoon. Ummanni Oromoo mataa ofii malee fira biraa hin qabuu jechuu ar’a arkuu qabna. Ilaalaa mee, umanni waliin biyya takka qubannu, kanneen amantii fii jiruu­jireenya waliin qabnu, ilmaan Oromoo akka maletti diinaan dhumaa jiru kanatti dirmachuu dhabuun barmoota nuuf tahuudha qaba. Haalli nu mudate kun tokkummaa teenyaaf nu bayyanachiisuu baannaan, gaafni biraa hin jiru.Sooreysi Jaaraa Abbaa­Gadaa gaafa Imaamni ‘Ifirratti Irkanno’ labsuun tana waan hubateef akka tahe nu agarsiisa.
Mootummaan Tigree hireen takkittiin isiin qabdu lafa teenya humna waraanattin qabatee irratti jiraatuudha; tana murteefatteeti jirti. Nuus humna fakkaataan ofirraa kaasuun malee falli biraa inuma hin jiru. Dhaloonni haarenyi tana sirritti hubateeti, wareegama lubbuu baasaa jira.
Tanaaf, waliif gallu malees humni akkasi akka dhufuu hin dandeenye baranii jiran. Manguddoon qabsoo Oromoo hubatan tokkummaan humnaawuun malee filmaani biraa akka hin jirre jala saranii dubbataa as gayan. Fakkeenyaaf, seenaa Jaarraa Abbaa­Gadaa fii Luba Guddinaa Tumsaa kaasunn ni dandayama.
“Lafee warseeysaa wanii biraa hin cabsitu yoo waliin cabsan malee, isinuma wal wallaachiseeti
waliin sinin cabsa, ar’a yoo beeytan malee.” Jaarraa Abbaa Gadaa. Dhaamsi isaanii kun yoomiyyu nuun waliin waan jiruuf, akka FIDOtti tokkummaa ummanni keenya fedhu dhugoomsuuf qopheeda.
Tokkummaan Humna! Oromiyaan Ni Bilisoomti!
Gumii Gola Hoogganoota FIDO, Irraa.
Gulaalaaf qunamtiif: fidooromiya@gmail.com
Previous Rakkoo Mooraa Keessaa Qabnu Yeroodhaan Furachuu Nu feesisa
Next Kan Daud Ibsaa waliin hidhata qabu Girmaa Xurunaa qofa osoo hin taane namni maqaan isaa Sheeraa je’amus qunnamtii kan caalu qaba.